Nei MaEmpaths Uye maNarcissist Vachipera Muhukama? - Vanarcissist
Zvinotemesa kuona kuti kazhinji sei empaths uye vanonyengedza vanopedzisira vari muhukama pamwe chete.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti idzi mhando mbiri dzevanhu dziri pamipendero yakatarisana yesecurity care spectrum, vanoita kunge vanodhonzwa pamwe chete sechifusi kumarimi.
Ivo vaviri vanoziva kuti zvinhu zviri kuzoenda zvakashata chaizvo, asi ivo havatomboita kunge vanozvibatsira ivo pachavo.
Chii Chinoita Kuti Vakabatana?
Izvi zvakanyanyisa kunaka kweinokachidza codependency kana zvasvika kune hukama. Empaths uye narcissists anonyanya asina hutano mapuzzle zvidimbu kune mumwe nemumwe.
Empaths anowanzo kuve ane mutsa unoshamisa, vanhu vane hanya vanokura pakubata vamwe. Ivo vaiwanzo kubatwa zvisina kufanira, kuregeredzwa, uye / kana kushayikwa hanya muhudiki hwavo, uye edza kupa vamwe rudo rwese, tarisiro, uye tarisiro yavaida zvakanyanya uye vasina kumbogashira.
Nekudaro, vanonyengedza vanoda kunamatwa uye kupokana pamusoro. Ivo vaiwanzoitirwawo zvisina kunaka uye / kana kuregeredzwa muhudiki hwavo, dzimwe nguva vaitosiiwa… asi pachinzvimbo chekutenderedza marwadzo ekunze kuti ave hanya kune vamwe, vaiatendeukira kukuwana kutarisisa nekuzvida ivo pachavo sezvazvinogona.
Maona kubatana apa?
Izvi zviviri zvakavezwa pamwechete kunyangwe vachida kuve kana kwete. Iwo maratidziro ezvisina kunaka, zvine chepfu zvidimbu zvepuzzle.
Chii Chinoita Kuti Varambe Vari Pamwe Chete?
Ivo vaviri vanobudirira pamutambo, asi nenzira dzakasiyana.
Kazhinji, empath inozonzwa kugadzikana pavanenge vachiitirwa zvakaipa, nekuti ndiwo mamiriro ezvinhu avanonyatsoziva. Vanonzwa sekunge vanoziva zvavari kuita kana ivo vari kuyedza nesimba kuti 'vawane' kune mumwe munhu kutariswa uye rudo.
online kudanana zviratidzo zvinoratidza kuti haafarire
Nekudaro, narcissist's sadistic streak inobudirira pahunhu uhu. Kune rimwe divi, ivo vanozove nekuzvidza pamusoro payo. Vachaona mumwe wavo seasina kusimba uye anonzwisa tsitsi, uye vachitamba nemanzwiro avo kuti vagare vachisveta uye kuyedza kuwana rudo nekutarisirwa.
Vachatamba mutambo une hutsinye wekatsi nembeva umo vaizo ' rudo bhomba ”Tsitsi pamwe nechunhu hwemutsa kuti varambe vachibatikana. Ipapo vanozozvinyima zvakare saka mumwe wavo anofanirwa kutsamwa kuti awane kuchengetwa uye rudo kubva kwavari zvakare.
Zvese mune zvese, zviri zvisingaite zvisina hutano pairing izvo zvisingatombopera zvakanaka.
Dzimwe nguva hukama hunopera nekukurumidza, pamwe nekuti narcissist akaneta kana empath yakave nekutya kwekutya. Panguva iyoyo, narcissist anozofamba achienda uye asingazombotarisa kumashure.
Mukupesana, iyo empath inozvirova vega kwemazera, vachifunga kuti dai ivo chete vakaratidza ZVIURU rudo, ZVIMWE kunzwira tsitsi, ZVAKAWANDA hanya, ipapo munhu wavakagutsikana pachavo kuti vaida vangadai vakagara. Uye zvinotonyanya kukosha, vangadai pakupedzisira vakavada mukudzoka.
Mukupesana, narcissist haigone kuti ambofunga nezvazvo zvachose, kutumira kurambana. Kana vakadaro, saka zvine kuseka kwekuzvidza kushaya simba uye kusiririsa kwavakaita.
Kana narcissist uye empaths vakwanisa kugara pamwe kwenguva refu, zvinowanzoitika nekuti ivo vakagadzira yakasimba codependency. Ivo vanodyidzana kubva kune mumwe nemumwe simba kunge rakamonyoroka, symbiotic zvipembenene. Mumwe anokura pakunamata uye anoburitsa hutsinye, mumwe wacho anoda hutsinye kuti atange kunamatwa kwavo.
Zvinoshungurudza, handizvo here?
Iyo Empathic Trauma Bond
Iwe unoziva here nezwi rekuti 'trauma bond'? Icho chinhu chinowanzoitika muvana vanoshungurudzwa nevabereki vavo.
Mumashoko akareruka, mhando yehukama hwepamoyo inogadzirwa kuburikidza nedanho rekubatwa zvisina kunaka uye tariro yenhema. Ngatishandisei muenzaniso wemwana anoshungurudzwa nemubereki anonyaradza.
Mwana acharwadziswa zvakanyanya nemubereki, kazhinji kuburikidza nehutsinye hwepfungwa, hwemashoko, kana hwepfungwa. Vachadzikiswa uye voudzwa kusakosha kwavo kuti ivo mutoro, kana mapenzi, kana chikanganiso. Mwana achapunzika pamoyo. Zvese zvavanoda ndeyekuti munhu wavanoda avaratidze kadiki diki kemutsa.
Mwana achaita zvese zvavanogona kuyedza kuwana chimedu cherudo rwemubereki uye rudo. Nekudaro, mubereki anogona kunge asina ushamwari uye ari kure, achitotuka kana kuita hutsinye, saka mwana anoedza zvakanyanya. Pakupedzisira, iye narcissist anozotendeuka ndokuda bhomba iyo diki, iyo inozopedzisira yapa iye murombo mwana iyo nguva yerudo uye chengetedzo.
Kusvikira yabvutwa zvakare, uye iyo inokuvadza kutenderera inotanga patsva.
Chii chinofanirwa kuve hukama hwakanaka, hune rudo pakati pemubereki nemwana hunopedzisira hwave mutambo unotyisa umo narcissist matoyi nemwana kuti vawane kutariswa uye sycophancy yavanoda.
ndinoramba ndichikanganisa zvakafanana
Nekudaro, mwana anokura kunyanyisa hypensensitivity kune yavo yemanzwiro mamiriro emanzwiro, saka ivo vanozoita chero chavanogona chero kwechinguva cherudo.
Ava vanhu vanotambura vanodzidza kushamwaridzana neavo vanova ndiko kunokonzera kurwadziwa kwepfungwa nekutengesa, zvakangodaro nekuti vakamanikidzwa kuzviita. Ivo vaifanira kukwenya-pwanya uye kutsvakirira mutsa diki nekuti ivo vaivimba zvakazara nevanovashungurudza pazvinhu zvese zvekutsigira kwavo uye nehupenyu hwakanaka.
Ivo zvinonzwisisika vanopedzisira vachidzokorora kutenderera uku nehukama uye kudanana hukama sezvavanokwegura. Vachagadzira zvekare mamiriro avanoziva netariro kuti panguva ino, vanozodiwa uye kukosheswa sezvavaigara vachida kuve.
MaEmpaths mazhinji Anoziva Izvi, Uye Sarudza maNarcissist Zvisinei
Iwe unogona kushamisika kuona kuti mazhinji empaths anonyatso kuziva nezve hunhu uhu, uye osarudza kuenda munzira iyoyo zvakadaro.
Vamwe vanoramba kudimbura hukama nevavanodanana navo nekuda kwekuti vanonzwa vakasungwa navo kunze kwekunzwa basa remhuri. Vangave vakazvishingisa pachavo kuti vavakaroorana navo 'vanonyatsovada zvakadzika pasi,' saka vanoramba vachishivirira kushungurudzwa, kunyangwe ivo vachinyatsoziva kuti vari kukuvadzwa.
Muchokwadi, vamwe vanoto bvarura majee nezve avo narcissist, uye kuti hukama hwavo hwakangoputswa sei zvakakwana kuti zvinhu zvifambe. Nekuti zvinoita sezvine hutano?
Zvakaoma kwazvo kupupurira rudzi urwu rwemamiriro uye kunzwa musina simba rekuvabatsira. Kana iwe uine hanya nezveshamwari kana nhengo yemhuri zvakadzama, uye ukaona kutambura kwazvo kwavanoita nemumwe / narcissistic mudiwa / mukadzi, iwe pasina mubvunzo unoda kuvabatsira kubuda mumamiriro akadaro.
Neimwe nzira, kana iwe uri empath uyo anonyatso kuziva nezve icho chawakasarudza kuve nemunyori, unogona kugara uchingobvaruka pakati pemanzwiro akasiyana.
Semuenzaniso, unogona kushora zvachose mabatiro aunoitwa nemumwe wako, asi iwe unoda chaizvo kuvabatsira nekuti iwe unoziva kuti kwavo narcissism kunobva kunzvimbo yekurwadziwa kwakadzika.
handinzwe kungwara zvakakwana kumukomana wangu
Asi vanokukuvadza zvakanyanya, uye iwe unoda kuti kukuvadzwa kumire, asi iwe unoziva hazvizo…
… Nekudaro iyo mweya inoramba ichitenderera pasi, pasi, pasi kusvika pakupedzisira yaparara.
Iyi mweya inotaridzika zvakare kana zvasvika kune empaths vanoziva kwavo codependence, uye vanoda rutsigiro nezvazvo, asi havadi chaizvo kutora danho kupedza mamiriro acho.
Vamwe vanhu vanotaura nezve iyi tsika se 'kubvunza.' Kana iwe usiri kujairana neshoko, iri mamiriro apo mumwe munhu achabvunza iwo iwo mubvunzo mumwe chete kakawanda, achitsvaga imwe mhinduro. Kana vasina kuwana iyo yavanoda, vanofuratira zviri kutaurwa… kusvikira nguva inotevera, apo pavachabvunza izvo zvakafanana zvakare.
Ivo vari kutsvaga kwekusimbiswa nekusimbiswa, kwete chokwadi.
Saka unogona kuve empath uyo anonyunyuta zvine shungu kushamwari dzako uye nenhengo dzemhuri nezvekuti anotyisa sei mumwe wako anovabata. Zvino, kana uye kana yako denderedzwa renzanga ikusheedza iwe pahukama hwako husina hutano, unogona kuita hasha navo. Vanotsunga sei kutaura nezvekushusha kwako nenzira iyoyo?
Vazhinji empaths vachadzivirira avo (anotyisa anoshusha narcissist) mudiwa kugehena nekudzoka, kunyangwe ivo vari kuvakonzera kusaguma kwekusuwa. Vachatotaura kuti ivo vanonyatsoziva kuti mumwe wavo anoshusha, asi kugara navo ndiko sarudzo yavo , uye inofanira kuremekedzwa.
Pakupedzisira, ivo vanoda kushandisa yavo denderedzwa denderedzwa semapfudzi ekuchema pavari nekuti vari kurapwa zvinotyisa, asi ivo vanoda kuti munhu wese akanganwe zvese 'zvakaipa' zvavakataura nekukurumidza apo yavo Stockholm syndrome inodzokera mukati.
Hazvina mhosva kuti narcissist wavo anovaitirei, vanowana tsananguro yacho.
'Haareve kuva nehutsinye, asi aive nehudiki hwakaipisisa ...'
'Chokwadi anoda kutarisirwa zvakanyanya, ane nyaya dzekusiya…'
'Hongu, anondirova uye anondiisa pasi zvakanyanya, asi ane matambudziko ehutano…'
Vachawana zvinotyisa kudzivirira mumwe wavo / anoshusha kana chero mumwe munhu akataura chimwe chinhu chakaipa pamusoro pavo.
Rangarira kuti pamusoro pezvose, izvo zvinoda zvakanyanya narcissist munyika ino kunamatwa. Hunhu hwavo hwese-hwekuzvisarudzira, hunhu-hwekuzvibata hunovanza kusagadzikana kwavo kusingadaviriki. Ichi ndicho chikonzero ivo vachida kugara vachisimbiswa nekunamata kubva kune avo vakavakomberedza.
Kana uye kana vakasangana nemunhu asingavadi, wavasingakwanise kumufadza, kana asina hanya navo zvachose, izvo zvinogona kuvakuvadza zvakanyanya.
Uye saka vanotendeukira kumhuka yavo yemhuka, vachichema uye 'vasinganetseki,' uye yavo empath inorovera mugiya refu kuti ivadzivirire. Vanotenda kuti kana vakachengetedza munyori wenhau, izvo zvinozoratidza kwavari kuti vanovada zvakadii, uye ivo vachazoratidzwa rudo mushure ...
Mushure mezvose, munhu wese anogona kugadziriswa, kana kupodzwa, kana 'kuponeswa' nerudo rwakakwana, hanya, uye tsitsi, handiti?
ini ndinongoda kuva ndega nguva dzese
Hukama Huno hahuzoita Nani
Kana iwe uri empath uyo akadzokororazve akaguma mune hukama hwakadai, zviri kumusoro iwe kuti uchinje maitiro ako.
Wako waanodhakwa naye haazoshanduke, zvisinei nekunzwisisa kukuru, kushivirira, rudo, uye kuzvipira kwaunokanda mugomba dema iro.
Havazoshanduke nekuti havawone hunhu hwavo sekushusha. Kunyangwe kuburikidza nemageneti, kubatana kwetsinga, kana zvavo zvinokuvadza zviitiko zvehujaya, yavo wiring ndeyekuti ivo kazhinji vanozviona sevanobatwa uye vafira kutenda.
Ivo havakwanise kunzwira tsitsi, uye pachinzvimbo vanongoona vamwe semotokari dzekuzadzisa zvavo zvavanoda nezvishuwo.
Chokwadi, vanhu vazhinji vanogona kuchinja, asi izvo zvinoitika chete kana vaine shungu dzakadzika dzekuita kudaro. Sei mumwe munhu achiisa chero kuedza kushanduka kana ivo vakatendeseka vasingatendi kuti vanoita chero chinhu chisina kunaka?
Chekutanga uye chakakosha, zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti nei zviri izvo kuti urambe uchikweverwa kune aya marudzi evanhu. Izvo chete nekuziva yako wega mavambo nyaya kuti iwe unokwanisa kukwanisa kuichinja.
Apa ndipo panonyanya kubatsira kuti uzviwanire iwe murapi akanaka. Vanogona kukutungamira nemimwe mibvunzo mikuru uye kurovedza muviri izvo zvinokutendera iwe kuti udzokere kwakatangira kukuvara kwako pachako.
Kana isu tikataurira avo vekare marwadzo kune kwavanobva, zvinogadzira inoyerera-pasi maitiro. Hatizopora zvemashiripiti nehusiku, asi zvinokatyamadza kuti epiphany pamusoro pekuti mamwe maitiro akatanga angakanganisa sei panguva ino. Izvi zvinogona kutove zvechokwadi makumi emakumi emakore pasi pemutsara.
Pane imwe nguva munhu aine iyo epiphany mhando, ivo vanogona kutyora iyo kutenderera.
Muchokwadi, zviri nyore kwazvo kuzviita. Iko kumberi, iwe ungangove waakaona shamwari yako yekunyengedza sevose vari vaviri vanobatwa kuti vanyorwe uye vasingasvikike pamoyo tsime rekutora kubva, ivo zvino vanozoonekwa nekujeka.
Panogona kunge paine tsitsi dziripo, sezvo empaths dzine hunhu hwakadai hwekuchengeta, asi haunzwe kudiwa kwakafanana kwekugamuchira rudo kana kukoshesa kubva kwavari. Kana iwe hauzove wakakanganiswa nemabhawa avo nemajabs. Zvichava zvakafanana nekutarisa mwana achikanda matombo kugomo mukuyedza kuwana mhinduro kubva mariri kana kukuvadza.
Paunosvika ipapo, narcissist haazove nesimba pamusoro pako. Iwe unenge uine kugona kuzvisunungura kubva kwavari, pasina kurwadziwa kunogara-kwenguva kwekushamisika kana iwe ungadai wakamboita chero chimwe chinhu kuvaita kuti vakude iwe.
Iwe unozokwanisa kutanga patsva, uchiziva kuti iyo isina hutano hutano hwekushungurudzika bond cycle yapera. Uye hauzombove neukama neye narcissist zvakare.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi kuti nei uchikwezvwa nevanotaura nezvezvinhu zvisina kunaka kana kuti ungarega sei kuvawira? Taura nachiremba nhasi anogona kukufamba nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
Maitiro Ekuita NaNarcissist: Iyo Chete Nzira Yakavimbiswa Kushanda
Ndeipi Iyo Grey Rock Maitiro Uye Maitiro Ekuishandisa Iwo Kumisidzana neNarcissists
inoratidza kudanana kwako naye
john cena akagadzirira kutinhira
wwe paige uye xavier matanda
kugamuchira vanhu sezvavari
catherine paiz uye michael b jordan
kutaura naye sei nezvehukama hwako